एक सय ३१ ‘गुन्डा' निगरानीमा, को छन् सूचीमा ? - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
एक सय ३१ ‘गुन्डा’ निगरानीमा, को छन् सूचीमा ?
काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनमा सुरक्षा चुनौती दिन सक्ने एक सय ३१ ‘गुन्डा’हरूको सूची बनाएर प्रहरीले उनीहरूमाथि निगरानी सुरु गरेको छ । महानगरीय प्रहरी कार्यालयले उपत्यकाका तीनै जिल्लामा गुन्डागर्दीमा संलग्नहरूको सूची नै पठाएर निगरानीमा राख्न निर्देशन दिएको हो । महानगरीय प्रहरी कार्यालयले महानगरीय अपराध महाशाखासहित काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर परिसरलाई सूचीसहित बिहीबार परिपत्र गरेको हो । परिपत्रमा केही पुराना गुन्डा नाइकेहरूको नाम भने छैन । सूचीमा अधिकांश नया“ गुन्डाहरू छन् । चुनावमा उनीहरूले उम्मेदवार तथा मतदातालाई धाकधम्की दिन सक्ने भएकाले सबैलाई निगरानीमा राख्न थालिएको महानगरीय प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
गोंगबुका गुन्डा नाइके साजन १५ वैशाखमा पक्राउ परेकोमा तेस्रो दिनमै छुटेका थिए । गुन्डागर्दीसम्बन्धी कानुन नभएकाले उनीहरूलाई सार्वजनिक अपराध चलाउनुपर्ने र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले साधरण धरौटीमै छाड्ने गरेको छ । निर्वाचनमा नेत्रविक्रम नेतृत्वको नेकपा र गुन्डाहरूलाई उपत्यकाका प्रमुख सुरक्षा चुनौती बनाएर सुरक्षा योजना बनाएको छ । नयाँपत्रिकाबाट